आँखाभरी आँशु पार्दै पूजा शर्माले दिइन् उजुरी
नायिका पूजा शर्माले सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीबिरुद्ध चलचित्र कलाकार संघमा उजुरी दिएकी छिन् । उनले यसअघि सञ्चारकर्मी सुवेदीसंगको एक टेलिभिजन अन्तर्वाताका कारण सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार बनेकी थिईन् ।
नायिका शर्माले यसअघिको बिषय आफूले बिर्सिसकेको बताउँदै आफूलाई पटकपटक सञ्चारकर्मी सुवेदीले टेलिभिजनबाटै होच्याउने खालका शब्द प्रयोग गरेकाले आफू उजुरी दिन बाध्य भएको बताईन् ।
केही दिन अघि पत्रकार सुबेदीले आफुविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिमा अपशब्द र होच्याउने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उनले आईतबार कलाकार सङ्घमा उजुरी दिएकी हुन् ।
उनले –‘आफैँ नजान्ने अनि हामीले चाहिँ लिएको इन्टभ्र्यू काटिदिनु पर्ने ? मिलाई मिलाई महानायिका बनाइदिनु पर्ने ? त्यो पनि दाह्रा निस्किएको अनुहारलाई ?’ भन्दै आफ्नो कार्यक्रममा व्यङ्ग गरेका थिए ।
निर्देशक सुदर्शन थापासँगै कलाकार संघ पुगेकी पूजा उजुरी दिदै गर्दा भावूक भएकी थिइन् । पूजाले भनिन्–‘३ महिना भैसकेको थियो । अघिल्लो ट्रोललाई मैले सहिरहेको थिएँ । फेरि मलाई अन्तरवार्ताका लागि बोलाउनुभयो, मैले आउँदिन भने । मान्छेलाई कहिलेपनि ह्यारेसमेन्ट गर्नका लागि बलात्कार नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उहाँले मलाई हरेक हप्ता गिराएर बोलिरहनुभएको छ । पछिल्लो भाग हेरेपछि मलाई नराम्रो लाग्यो, उहाँले मलाई भनेको शब्दले मलाई निकै भावूक बनायो । यसपछि, मैले अब लड्छु भन्ने निर्णय गरेँ ।’
चलचित्र कलाकार संघमा उजुरी दिँदै नायिका पूजा शर्मा ।नायिका शर्माले चलचित्र पत्रकार संघ, एपीवान टेलिभिजनमा पनि उजुरी दिएको बताएकी छिन् । साथै, उनले ‘प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र विकास बोर्ड’मा पनि उजुरी दिने जानकारी दिएकी छिन् ।
अहिले संचारकर्मीको भाषालाई लिएर पत्रकारहरु नै विरोधमा उत्रिएका छन् उनले प्रयोग गरेको भाषा एकदमै तल्लोस्तरको भएको चलचित्र पत्रकारहरु नै बताउँछन् । तर केही पत्रकारहरु भने चर्चित हुनको लागि यसो गरिएको पनि हुनसक्ने बताउँछन् । धेरै लामो समयदेखि रजतपत कार्यक्रम चलाउने प्रकाश सुवेदीले चर्चा बटुल्नको लागि जानीजानी यो कार्य गरेको हुनसक्ने पनि कतिको आंकलन छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमवार, साउन २६, २०७७&nbsp०६:५६:०२
बेलायतमा एकै दिन फेला परे १०६२ नयाँ संक्रमित
कुकुर बाँध्ने बेल्टले सुशान्तको घाँटी थिचेर मा रिएको पूर्व म्यानेजरको दावी
Categories Select Category Auto (314) Blog (3) English (768) Entertainment (431) Finance (731) Nepali (7,837) Sports (5,232) Tech (1,380) World (2,844)